‘सायद’ सिक्वेलले पायो निर्देशक, पुष्पराज न्यौपाने अनुबन्धित :: a1nepal.com.np
‘सायद’ सिक्वेलले अन्तत निर्देशक पाएको छ । दुर्गिश फिल्मसको चौंथो प्रोजेक्ट ‘सायद २’मा पुष्पराज न्यौपाने अनुबन्धित भएका छन । बलिउडमा चलेका सिनेमाहरुमा सहायक निर्देशन गरिसकेका न्यौपानेले दुर्गिश फिल्मसबाट निर्देशकको रुपमा डेब्यु गर्न लागेका हुन् ।
सायद, होस्टेल र होस्टेल रिटन्र्सपछि दुर्गिश फिल्मसले चौंथो सिनेमा बनाउन लागेको हो । दुर्गिश फिल्मस प्रमुख सुनिल रावलले यसबारे पुष्टि गरे ।
‘सायद २’ निर्देशनका लागि आवेदन दिएका झन्डै दर्जन आवेदकमध्येबाट न्यौपाने छानिएका हुन् । न्यौपानेले बलिउडका डेन्जरस इस्क, राज ३, हेट स्टोरी २ र ३, म्याक्सिमम, राज ३ मा काम गरिसकेका छन् । सिरियलहरु घरकी लक्ष्मी बेटियाँ, गीता, मधुबाला र सावधान इन्डियामा पनि उनले निर्देशकको रुपमा काम गरिसकेको दुर्गिश फिल्मसले जनाएको छ । न्यौपानेले वातावरणसम्बन्धी डकुमेन्ट्री पनि निर्देशन गरिसकेका छन् । ‘सायद’लाई सुरज सुब्बा नाल्बोले निर्देशन गरेका थिए । त्यसयता कम्पनीले नयाँ निर्देशकलाई मौका दिएको थियो । सोसल ड्रामा जानराको सिनेमाको छायांकन नेपाल र जापानमा हुने भएको छ । कलाकार छनौट भने बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सामान्य ब्याबहारलाइ स्क्यान्डल बनाइएको भुबनको भनाई श्वेता खड्काद्वारा स्व. श्रीको जन्मतिथीको असरमा अनाथ बालबालीका लाई न्यानो लूगा वितरण दर्शकले चक्लेट नहेरिदिएको भन्दै फेसवूकमा अभिनेत्री पुजनाको गुनासो नारायण गोपालको २५ औं समृति दिवस आज, यो सम्झिने मन छ म बिर्सुं कसरी ? नर्स हरुपनि सौन्दर्य प्रतियोगितमा भिड्दै [फोटो फिचर] सुमित खड्काको देशभक्तिले ओतप्रोत ‘देशका लागि केहि गर्न मन छ” बोलको गीत बजारमा आन्दोलनमा उक्साहट थपिन सक्ने भन्दै चलचित्र भैरवलाई तराई प्रदर्शनमा रोक अभिनेता सुनील थापालाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड आठौं नेफ्टा अवार्ड कतारमा गरिदै, क्लाप पड्काएर अवार्डको घोषणा चलचित्र छायांकनको गन्तव्य वन्दै नुवाकोट
← यु १९ विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल ग्रुप अफ डेथमा	नाकाबन्दीविरुद्ध इजरायलको तेलअभिवमा नेपालीद्वारा विरोध प्रदर्शन →